Ny androaniko | Desambra 2016
[Ankapobeny ] 23 Desambra, 2016 18:22
Toraka bolongana farany amin'ity taona ity.
Mbola tsy misioka aloha fa mbola tsy tafavoaka ny 2016 , nefa azo lazaina fa tapitra izy ity na izany aza.
Ka dia ity angamba ny toraka bolongana farany amin'ity taona ity, entina hanolorana ny firariantsoa ho anareo namana mpamaky ny redirediko eto, mpanaraka ny tsetsatsetsa sy tifitifi-basy ataoko amin'ny havana eto isak'izay mahatsiaro, mpampiady hevitra miaraka amiko eto.
Somary nandringandringa izay aho tamin'ity taona ity - eny e, sy tamin'ny taona teo aloha ihany koa fa tsy nizesta fotsiny - krkrkrkr. Fa tamin'ity dia nasiako fanovana kely ny famindra dia ohatry ny nety kely ihany. Ary ny tena nahafinaritra ahy dia nahitako tsirony vetivety teo tamin'ny fiverenana niblaogy. Nataoko dia ho tsy hisy atoraka mihitsy aho tamin'ireny fa hoe za-dratsy ni-kounkou sy nizemzem sy nilaolilaolina tarý andrefan-trano tarý fotsiny.
Ny zavatra iray tena voamariko ary hitako fa nahatsara ahy dia ity : hafa ihany tokoa kay ilay mirediredy irery ato amin'ny blaogy ! Tena ilaina ny mamoaka ny mavesatra ao anaty fo, fa hafa ihany anefa ny hoe tsy voatery hozaraina amin'ny rehetra ilay izy. Indray andro nisy namana iray taitra ary niala tsiny hoe tsy naharaka vaovao raha sendra tsikariny tampoka ny toraka be nataoko tatsy an'efitra ilany tatsy. Izaho moa namaly hoe tena hafa mihitsy kosa ilay tsy misy "spekta" fa manoratra hanamaivanana fo fotsiny. Satria raha natao toy ny fifampizarana taloha io, hoy aho taminy, dia ohatran'ny vao maika navesatra ilay izy satria toa mainka mampifendrofendro mahita ireo namana milahatra mankahery.
Manantena aho fa mbola hitohy ny fahavitrihako hampiasa ny fahaizako mandaha-tsoratra. Ilay mandaha-teny aloha tsy kapoakako fa tsoriko, na eo aza ity izaho katsetsoka sy petsapetsana ity. Tena tsy vitako ny handray fitenenana imasom-bahoaka izany, fa raha hanoratra kosa dia azo lazaina fa manavanana ahy. Ny indro kely fotsiny dia raha misy mahazo ahy dia matetika amin'ny teny frantsay no mivoaka kokoa ny ao am-poko. Raha resaka ara-piarahamonina sy ny sisa kosa dia velesiko tsara amin'ny teny malagasy.
Ka dia mbola eto ihany isika izao ry sefo Hery ; mbola mamerina fisaorana hatrany tamin'ilay fanasana ati-doha 9 taona lasa izay hoe "Inona no manakana anao tsy hanokatra blaogy". Tsy notaritina sy nampianarina nampiasa azy fotsiny fa mbola nohenoina ilay faniriana hoe mila blaogy amin'ny teny frantsay koa fa aleo hisaraka ny kisoa sy ny vorona.
Ary mbola eto am-piandrasana ilay vinavinantsika tamin'ny volana aogositra isika izao hoe amboarina kely ny seraserantsika dia any indray mifampitarika mba samy malagasy (d'efa kôpy zay kôpy, hihihi).
Manaova fety sambatra daholo o !